ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Myanmar Brilliance Auto
Myanmar Brilliance Auto » ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း
ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ယုံကြည်ချက်
အရောင်းပြခန်း နှင့် စက်ရုံ
Nippon Auto Showroom and Services
အမှတ် 47/48(B))၊ ဟံသာဝတီလမ်းနှင့်ဗဟိုလမ်းထောင့်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
PH: 09 974 040 700,09 974 040 800,01 504 666,01 504 333
အမှတ် (၂၄၆ / M) ဦး ရွှေမြူလမ်းနှင့် ဦး အောင်သူလမ်းထောင့်၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် (၂)၊ လှိုင်သာယာ၊ ရန်ကုန်။
PH: +951685847, +959974040700
အမှတ်-B-4၊ မလိခအရောင်းပြခန်းအိမ်ယာ၊ ရတနာလမ်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Company team profile and short bio.
Mr. Khin Maung San
Mrs. Pyae Win Thida
Phone: 09-421103951, 09-444999835
Mr. Myo Zaw Aung
Ms. Zar Chi
ကားရှာဖို့လိုပါသလား? Contact Us